Filoha Rajaonarimampianina : tsy nisy nahavita ny vitan’ny fitondrana, hono, hatramin’izay (NewsMada) | AEMW
Filoha Rajaonarimampianina : tsy nisy nahavita ny vitan’ny fitondrana, hono, hatramin’izay (NewsMada)
« Mijere any amin’ny 50 taona taorian’ny roa taona: inona no vita tao amin’ny tanànanao? Sahy manao fanamby aminao aho, fa tao anatin’izay roa taona izay: na eo amin’ny ady, mihoatra noho izany no ataontsika. » hoy ny filoha Rajaonarimampianina, tany Faratsiho, omaly.
« Jereo ny niaingantsika tamin’ny 25 janoary 2014: Madagasikara voasazy no teo an-tanako rehefa nandray ny fitondrana aho. Voasazy ara-toekarena, vola, politika », hoy izy. Nanafaka tamin’izany izy, araka ny nambarany.
Tsy an’ny filoham-pirenena irery ihany ny fampandrosoana, fa an’ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tarehimarika tamin’ireo mpamatsy vola irasam-pirenena: 92% ny tahan’ny fahantrana sy ny fadiranovana, tamin’ny 25 janoary 2014.
Mbola mijoro isika ary amin’izany ny asa ataontsika. Tsy kivy amin’izany fa mpitarika ny vahoaka hampandroso izy. Ao anatin’ny fampandrosoana fototra ny fametrahana fotodrafitrasa.
Tsy araka ny kabary ny marina sy ny zava-misy
Tena araka izany no iainan’ny vahoaka ?… Tsy nisy nahavita ny vitan’ny fitondrana tao anatin’ny roa taona sy tapany tokoa ireo nifandimby teo aloha amin’ny fanapotehana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka? Eo ny kolikoly avo lenta, ny hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy fifidianana loholona, ny kiantranontrano, ny fivarotan-tanindrazana, ny harem-pirenena gaboraraka, ireo raharaha maro tsy mazava vitavita ho azy: ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny « Raharaha Anjozorobe » nahavoasaringotra ny zanaky ny filoha, ny ”raharahan’i Soamahamanina”, ny « Raharaha rongony » tany Toliara, ny momba ny fiaramanidin’ny filohan’ny Repoblika hoe novidiany na hofainy…
Eo koa ny fampihorohoroana izay miteny sy mihetsika rehetra, soketaina ho manakorontana sy manongam-panjakana; ny tsy fanarahan-dalàna manomboka amin’ny lalàmpanorenana; ny tetika hangejana tanteraka ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampahalalam-baovao; ny lalàna hanenjehana ny mpifaninana amin’ny tena amin’ny fifidianana, amin’ny fananganana fitsarana manokana momba ny toekarena, vola, hetra, taona 2002 hatramin’ny faran’ny Tetezamita… …
Manginy ny delestazy, ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana… Tsy nisy nahavita izany rehetra izany tao anatin’ny roa taona ny mpitondra nifandimby. Nanafaka tamin’ny fonja ny mpitondra, fa nitondra ny vahoaka any an-davaky ny fahantrana lalina. Tsy manaiky ho diso amin’ny tsy fahombiazana raha tsy haloam-bahoaka?
← 55 taona ny polisim-pirenena : mitohy ny lalao ara-panatanjahantena (NewsMada)
Neken’ny HCCny lalàn’ny fifandraisana… (NewsMada) →